Fahasemporan’ny mpiasa teny Anosizato Tsy nisy fanafody diso daozy, hoy ny “Stop insectes”
Tamin’ireo mpiasa 70 latsaka niditra hopitaly teo amin’ny HJRA Ampefiloha no nisy nanizingizina fa raha tsy nisy ilay famendrahana fanafody teo ivelany tsy nitranga ny loza tamin’iny sabotsy iny.
Nanambara ny mpiandraikitra ny orin’asa afak’haba Gama-textile, Erica Andria fa efa faninefany ny fiaraha-miasa tamin’ny «stop insectes» fa izao vao nahitan-doza. Nanambara mazava ny lehiben’io orinasa mpandraraka fanafody biby kely io fa tsy nisy fanafody lany daty na diso daozy nampiasaina. « 1,5% hatrany no fatran’io « insectiside » io hatramin’izay. Rano ny 98,5%, araka ny fampiasa hatrizay. Ireo biby kely tsy misy taolana tahaka ny kadradraka, lalitra, vitsika, « insectes » no matin’io fanafody io. Efa 16 taona izao no niasako tamin’io orinasa iraisam-pirenena io izay manana ny foibeny any La Réunion, manana ny sampany eto Madagasikara. Ilay famendrahana koa tsy natao tao anatin’ny efitra misy ireo mpiasa. Efa nomena ny lehiben’ny dokotera ny taratasy mahakasika ny fanafody nampiasainay sy ny fisorohana ary ny fiarovana vokatr’io fanafody io. Efa naterina any amin’ny zandary koa ny taratasy sy ny fanafody.” Hoy i Bourdel Awwil, tompon’andraikitry ny orinasa Stop Insectes izay notronin’ireo teknisianina telo niaraka tamin’ny antotan-taratasy maro. Andrasana araka izany ny tohin’ny fanadihadiana.